Danaha Qarsoon Ee Kenya Iyo Ethiopia Ka Leeyihiin Somaliya Oo Doorashada Jubaland Ay Bannaanka Keentay - Jigjiga Online
HomeSomalidaDanaha Qarsoon Ee Kenya Iyo Ethiopia Ka Leeyihiin Somaliya Oo Doorashada Jubaland Ay Bannaanka Keentay
Danaha Qarsoon Ee Kenya Iyo Ethiopia Ka Leeyihiin Somaliya Oo Doorashada Jubaland Ay Bannaanka Keentay
Kismaayo (JigjigaOnline) – Bayaan goordhaweyd ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in la xiray dhamaan goobaha laga soo galo magaalada Kismayo ee cir, dhul iyo badba.
Go’aankan ayaa imaneysa iyadoo Khamiista lagu wado inay doorashada madaxtinnimada maamulkaasi ay ka dhacdo magaalada Kismayo. Balse weli waxaa taagan khilaaf balaaran oo keenay in kooxaha mucaaradku ay iyana ku dhawaaqaan in isla maalintaas ay dooranayaan madaxweyne.
Wufuud sare oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada AMISOM, Tigabu Yilma – oo Itoobiyan ah – waxaana la filaya in ay xal ka garaan ismari waaga ka taagan Kismaayo.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Ismari waagan wuxuu sababay “khilaaf” soo kala dhexgala dalalka deriska ah ee Kenya iyo Itoobiya, sida ay ka soo xigatay dadka falanqeeya arrimaha maniga.
Labada dal ayaa loo arkaa in ay dano kala duwan ka leeyihiin Soomaaliya. Dowladuhu dano iyo cadifad ayay ku shaqeeyaan. Naxariis kuma shaqeeyaan”, ayuu yiri Cabdirashiid Xaashi, madaxa machadka cilmi barista siyaasadeed ee Soomaaliya ee Heritage.
“Markastoo annaga gudaheena aan wareer iyo caqli xumo aan ka sameyno; markasta oo ay badato in gacmo kale ay soo galaan iyagoo u muuqda in ay qof la jiraan, waxay (gacmahaas kale ) riixanayaan danahooda,” ayuu yiri Cabdirashiid.
Cabdirashiid Xaashi oo arrintan u arka fursad ay bixiyeen siyaasiyiinta ayaa yiri: “Waa nasiib darro in hadda ay Itoobiya iyo Kenya ku murmayaan doorashada jubbaland, Qaramada Midoobeyna ay go’aanno soo saarayso. Siyaasiyiinta Soomalida ayaa fursadaas siinaya”.
Wuxuu yiri: “Khilaafkii doorashada Kismaayo wuxuu u egyahay in uu faraha ka baxayo. Laba waddan oo jaar ah oo ciidamada ka joogaan Soomaliya in ay ku hardamayaan waa wax muuqdo oo la wada arkayo”.
“Waxay ila tahay halkii ay isla gaareen dowladda federalka iyo mamulka Jubbaland ama musharrixiinta Jubbaland gudeheeda ku tartamaya in waanwaan ay caqli ku dareen ilama ahan in la heli karo”, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cadami.
Beesha Caalamka ee Arrimaha Soomaaliya daneeya ayaa isku deyay in arrintan xal loo helo, balse waxay u muuqataan “in taasi aysan suuragalin”.
Cadami waxaa u muqata in xalka uu ka imaan karo dhanka dowladaha kenya iyo Itoobiya wuxuunta yiri: “Waxaa dhici karta in ay xal garaan dowladahan manta ku haya meesha e ekenya iyo Itoobiya ayna isla gaaraan in ay tageeraan doorashada hadda socota iyo ciddii ku guuleysata ama in ay isku waafaqaan musharrax dhexdhexaad ah oo ay caleemo saaraan”.
Balse cabdirashiid Xaashi ayaa sheegay in Soomaalida ay noqotay sida “kubad la isu dhiibayo”.
“Sidii ay u soo socotay anaga hadda waxaan mareynaa in aan noqonay banoonigii la tuurtuurayay, ciyaartana dadkale u sallaxantahay”.
Haddii xaaladda au sidan ku socoto “Marka la garo January 2020, tabartooda way sii yaraaneysaa”, ayuu yiri Cabdirashiid oo ka hadlayay dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sannad iyo bar gudahood wajahaya doorasho, taas oo Cabdirashiid xaashi uu u arko in ay ku tahay caqabad ayna “daciifineyso tabartii dowladda”.
Balse Cadami wuxuu sheegay in Kismaayo ay gacanta u gali karto Al-Shabaab “oo aan ka fogeyn halkaas in ay ka faa’ideystaan ayna ka dhex qaadaan xoogagga meesha isku haya”.
Cabdirashiid Xaashi, Agaasimaha machadka Heritage dhankiisa wuxuu aaminsan yahay: “Haddii Jubbaland ay ka adkaadaanna waa uun meel ka fog oo khilaaf soo jiitamayay uu ka jiro oo ay furfureen ayey noqoneysaa. Haddii laga adkaadana waxay noqoneysaa in Puntland iyo Jubbaland ay u xanaaqsan yihiin”.
Axmed maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo markale u tartamayo inuu xilka qabto “wuxuu saaxiib dhow oo arrimaha amniga la yahay Kenya”, sida Reuters ay qortay.
Wakaaladda ayaa sidoo kale qortay in “Itoobiya ay saaxiibtinimo dhow oo sii xoogeysaneysa la yeelatay dowladda Federaalka ee Soomaaliya”.
Trump oo baajiyay safarkiisii Denmark “muranka gadashada jasiiradda Greanland” darteed
JIGJIGA: Xildhibaanno Xabsiga La Dhigay Iyo Dembiyada Loo Haysto